Boqor Buurmadow Oo Xaqiiqadda Taabsiiyay Madaxweynaha Puntland | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Boqor Buurmadow Oo Xaqiiqadda Taabsiiyay Madaxweynaha Puntland
Carmo (SDWO): Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur-madow, oo ka mida madax dhaqameedka Somaliland ayaa maamulka Puntland ugu baaqay in aanay dagaal iyo colaad ku bilaabin xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi.
Waxaanu Buur-madow waxa uu ka rejeeyay madaxweyne Gaaska Puntland in haddii uu mar kale ku soo baxo doorashadda wixii dhibaato ah ee u dhexeeya Somaliland iyo maamulka Puntland uu si nabad ah ku dhameeyo.
Boqor Cismaan Buur-madow, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay munaasibad lagu caleemo saarayay Duubka beesha Cali Saleebaan (majeerteen) oo maanta ka qabsoomay magaaladda Carmo oo ka tirsan gobolka Bari.
Iyadoo xafladaasi ay joogeen madaxweynaha Puntland Cabdi Weli Gaas, wasiiro ka socday dawladda federaalka Soomaaliya oo uu hogaaminayay wasiirka amniga gudaha, xildhibaano, wasiirro ka tirsan Puntland iyo sidoo kale qaar ka mida siyaasiyiinta u sharaxan madaxtinimadda Puntland.
Daawo Hadalka Buurmadow: